Daawo muuqaalka: Eng. Bashiir Axmed Max’ed oo Kismaayo Shirjaraid ku qabtay |
Daawo muuqaalka: Eng. Bashiir Axmed Max’ed oo Kismaayo Shirjaraid ku qabtay
Eng. Bashiir Axmed Max’ed oo ka mid ah aqoonyahannada qurba joogta ah ee kasoo jeeda Jubooyinka ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyay in uu u taaganyahay xilka madaxtinimo ee dowlad goboleedka Jubbland ee la filayo in dhawaan looga dhawaaqo magaalada Kismaayo.
Masuulkani ayaa sidoo kale sheegay in arimaha ugu horeeyo ee uu mudnaanta 1-aad siin doono ay kamid yihiin arimaha nabadgelyada, waxbarashada iyo caafimaadka, isagoona xusay in mudada sedexda sano ee uu xilka hayo uu la iman doono isbadal muuqda.
Magaalada Kismaayo ayaa wax aka soconayo shir la doonayo in dowlad goboleed loogu dhiso Jubooyinka, waxaan shirkaasi uu imika marayaa heer gabagabo ah, iyadoona la filayo in todobaadyada soo socdo ay ergada ka qeybqaadaneeysa shirka ay ku dhawaaqaan madaxweeynaha dowlad goboleedka Jubbland State of Somalia.